दुप्चेश्वरको बजेट सार्वजनिक : रु.४४ करोड २४ लाख विनियोजन - Akhabarpati.com
यस्ता छन् कार्यक्रमहरु (विवरण सहित)
असार ११, नुवाकोट ।
दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अन्जु आचार्यद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थीक वर्षको कुल बजेट ४४ करोड २४ लाख २१ हजार १ सय बिस रुपैयाँ रहेको छ ।
सुन्दर र सम्वृद्ध दुप्चेश्वरको सार, पर्यटन, सम्पदा र जलाधार भन्ने नाराका साथ प्रस्तुत उक्त बजेटलाई गाउँ सभाले सर्वसम्मतीले पास गरेको छ ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. ३ का अध्यक्ष धु्रवकर केसीले आ.व. २०७७÷०७८मा क्षेत्रगत रुपमा भएका कामहरुको समिक्षा तथा उपलब्धीहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
गा.पा. अध्यक्ष योविन्द्र सिँह तामाङले गाउँ सभा सदस्यहरुलाई प्रस्तुत बजेटमाथी आफ्नो राय पेश गर्न समय दिएका थिए । दिइएको समयमा बोल्दै, वडा अध्यक्षहरु क्रमशः २ का दावा तामाङ, ५ का संच तामाङ, ६ का किशोर आचार्य र ७ का भेष बहादुर सिटौलाले आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसैगरी, वडा सदस्यहरुमा होमबहादुर तामाङ, भिमबहादुर गुु्रुङ र राजकुमार श्रेष्ठले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरे । वडा सदस्य श्रेष्ठले बजेट बढी कार्यकर्तामुखी देखिएको टिप्पणी गरे पनि अन्तमा बजेट स्विकार्य भएको बताएका थिए ।
बजेटमा कोभिडका कारण गाउँ फर्किएका युवाकाका लागि स्वावलम्बी बनाउने भन्दै कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा रु. ४६ लाख छुट्याइएको छ । दुप्चेश्वरको माथिल्लो भेगलाई आलु पकेट छेत्रका रुपमा परिस्कृत गर्न रु. १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
महिला स्वास्थ्य स्वम्सेविका र सुत्केरी यातायात खर्च दोब्बर बनाइने
बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु. ५१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त रकमबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद, टेलिमेडिनि सेवा, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ प्रवर्धन कार्यक्रम, हटलाईन सेवा, धामी झाँक्री अभिमुखिकरण आदी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने बताइएको छ ।
महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरुले गाउँपालिकाको तर्फबाट वार्षिक रुपमा यातायात खर्च बापत पाउँदै आएको रु.६ हजारलाई दोब्बर गरी १२ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
त्यसैगरी संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै पूर्ण संस्थागत सुत्केरी युक्त गाउँपालिका बनाउने भन्दै सुत्केरीले यातायात बापत पाउने रु. २ हजारलाई दोब्बर बढाएर रु. ४ हजार पुर्याइएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै आ.व. २०७८÷०७९ को बजेटमा गाउँपालिकाको तीनओटा सामूदायिक विद्यालयमा टेलिएजुकेशन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी शुन्य दरवन्दी भएको विद्यालयमा भौचरमा आधारित शैक्षिक सुदृढीकरण कार्यक्रम, शैक्षिक क्यालेण्डर, तामाङ भाषामा स्थानिय पाठ्यक्रम आदि कार्यक्रमका लागि गा.पा.ले रु. ८३ लाख विनियोजन गरेको छ ।
महिला, बालबालिका, अपाङ्गता तथा जेष्ठ नागरिक
गा.पा.ले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता तथा जेष्ठ नागरिकको हक हित तथा संरक्षणक लागि बजेटमा रु. २० लाख विनियोजन गरेको छ ।
उक्त बजेटबाट महिला, बालबालिका, अपाङ्गता तथा जेष्ठ नागरिकका लागि सुरक्षा, समान अग्रसरता, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकका लागि घरदैलो कार्यक्रम मार्फत सेवा प्रवाह, न्यायिक समितिको व्यवस्थापकिय पक्षको सुधार आदि कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास शिर्षकमा सातै वडाका लागि कु्ल रु. २ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यस अन्तरगत मानेभन्ज्याङ–जिम्नाङ–सानोगोल्फू सडक स्तरोन्नतीका लागि रु. ७९ लाख २७ हजार र मिश्रभञ्ज्याङ–बछला मावि–सेराङ सडक स्तरोन्नतीका लागि रु. ६१ लख ७४ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, समुन्द्रटार–हुँग–ओडारे–कँडेनी सडक स्तरोन्नतीका लागि रु. ८२ लाख ६८ हजार र समुन्द्रटार –रामती–मिश्रभञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नतीका लागि ८३ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
गा.पा.ले वडास्तरिय कार्यक्रम अन्तरगत वडा नं. १, ४, ५ र ६ का लागि प्रत्येक वडालाई रु. ४० लाख विनियोजन गरेको छ । यस्तै, वडा नं. २ र ७ लाई प्रति वडा रु. ४० लाख ५० हजार छुट्याइएको छ भने वडा नं. ३ का लागि रु. ४२ लाख ५० हजार विनियोजन भएको छ ।
समग्रमा दुप्चेश्वर गा.पा.ले आव २०७८÷०७९ को बजेटमा केही नयाँ लोकप्रिय कार्यक्रम र केही पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता दिएको छ ।